စဈကောငျစီတပျ တပျသားသဈတဦးလြှငျ သိနျး ၃၀ ဝနျး ကငျြထိစြေးပေါကျနပွေီး တဦးစု​ဆောငျးနိုငျလြှငျ ခှငျ့တဈလခှဲပေး – Myanmar Media
စဈကောငျစီတပျ တပျသားသဈတဦးလြှငျ သိနျး ၃၀ ဝနျး ကငျြထိစြေးပေါကျနပွေီး တဦးစု​ဆောငျးနိုငျလြှငျ ခှငျ့တလခှဲပေးစဈကောငျစီလကျအောကျခံတပျမြားသို့ဝငျရောကျလိုသူနညျးပါးနသေဖွငျ့ တပျသားသဈတဦးလြှငျ သိနျး ၃၀ ဝနျး ကငျြထိပေး၍ စုဆောငျးနပွေီး လူသဈစုနိုငျသညျ့စဈကောငျစီတပျဖှဲ့ဝငျအား ခှငျ့တ
လခှဲပေးနကွေောငျး စဈ ကောငျစီတပျ အသိုငျးအဝိုငျးထံကသိရသညျလကျရှိတှငျစဈကောငျစီတပျသားသဈတဦးလြှငျရေ တပျ နှငျ့လတေပျအတှကျ ၁၅ သိနျးဝနျးကငျြ၊ လကျရုံးတပျအ တှကျ ၂၃ သိနျးဝနျးကငျြနှငျ့ ခွလေငျြတိုကျခိုကျရေးတပျမြားအတှကျ ၃၀ သိနျးဝနျး ကငျြထိပေး၍ လိုကျလံစု ဆောငျးနရေကွောငျး သိ
ရသညျယခငျက စဈသားသဈတဦးလြှငျ ရတေပျနှငျ့လတေပျတှငျ ၇ သိနျးဝနျးကငျြ၊ လကျရုံးတပျအတှကျ ၁၀သိနျးဝနျး ကငျြ၊ တိုကျခိုကျရေးတပျမြားအတှကျ ၁၅ သိနျးဝနျးကငျြဖွငျ့ စုဆောငျးရရှိနသေျောလညျး စဈအာဏာသိမျးပွီးနောကျ ယခုစြေးနှုနျးမြားထိပေါကျလာခွငျးဖွဈသညျ။
စြေးနှုနျးကတပျမှူးပျေါလစီပျေါမူတညျတယျ ရဲဘျောသဈတယောကျရှိတယျဆိုတဲ့သတငျးကွားတာနဲ့ စု ဆောငျးရေးလောကသားတှကေအပွိုငျအဆိုငျ စြေးချေါကွတယျ
အမြားဆုံးပေးနိုငျတဲ့သူကရတာဘဲ ရဲဘျောသဈစုရတာအရမျးခကျခဲတယျ အရငျထဲကမလှယျတာခုကပိုဆိုးနတေယျ အရငျက ကြှနျတျောတို့ ခွလေငျြ/ခွမွေနျဆို ၁၅ သိနျး ၁၆ သိနျးဆိုတာထနျကုနျဘဲ
အရငျထကျစြေးအမြားကွီးပေးတာတောငျ ဘယျလိုမှစုလို့ အဆငျမပွဘေူးဖွဈနတေယျဟု နယျလှညျ့စဈသားစု ဆောငျးရေးလုပျဆောငျနသေူတဦးက ဧရာဝတီတိုငျးမျကိုပွောသညျ
A Myanmar military guard of honour marches duringaceremony to mark the 71th anniversary of Martyrs’ Day in Yangon on July 19, 2018. – Myanmar observes the 71th anniversary of Martyrs’ Day, marking the assassination of independence heroes including Aung San Suu Kyi’s father, who helped end British colonial rule. (Photo by YE AUNG THU / AFP)
လကျရှိတှငျ စဈကောငျစီအကွီးတနျးအရာရှိမြားက ရသညျ့နညျးလမျးဖွငျ့ စီမံခကျြရေးဆှဲ၍ စဈသားသဈစု ဆောငျးနိုငျရေး တပျမှူးမြားကို ဖိအားပေးစခေိုငျးနကွေောငျး သိရသညျ
စဈသားသဈကသူတို့(တပျမှူး)တှအေတှကျအ ရေးကွီးတယျ တိုငျးလေးလပတျအစညျးအဝေး တှမှော လေးလနလေို့မှတယောကျမှမစုနိုငျရငျ အပွောအဆိုခံရတယျ။ မြားမြားစုနိုငျတဲ့သူက ရာထူးတိုးဦးစားပေးခံရသလိုမွနျလညျးမွနျတယျ
ဒါကွောငျ့လညျး အပွိုငျအဆိုငျတှစြေေးပေးကွ တာဟု မကှေးမွို့အခွစေိုကျအမှတျ (၃) စဈသားစုဆောငျးရေးတပျနှငျ့နီးစပျသူတဦးက ဧရာဝတီတိုငျးမျကိုပွောသညျထို့ပွငျ စဈသားသဈတဦးရရှိပါက စုဆောငျးလာသညျ့စဈကောငျစီတပျဖှဲ့ဝငျက ခှငျ့တလခှဲ ခံစားခှငျ့နှငျ့ ဆုခြီးမွှငျ့ခွငျးခံရကွောငျး သိရသညျ။
ရဲဘျောသဈတယောကျရရငျ ခှငျ့တလခှဲရတယျ။ ဒါဘာ (တပျရငျးဆန်ဒဖျောထုတျပှဲ)မှာဆုပေးတယျ။အရငျကဆို တပျကထှကျခငျြလို့ ထှကျခှငျ့မွနျခငျြ ရငျ ရဲဘျောသဈ ၃ ယောကျစုပေးရတာမြိုးရှိတယျ
ခုနောကျပိုငျးတော့ ရဲ ဘျောသဈကမရတာမြားပါတယျ ဟု ရနျကုနျတိုငျးလကျ အောကျရှိ စဈကောငျစီတပျဖှဲ့ဝငျတဦးက ဧရာဝတီတိုငျးမျကို ပွောသညျလကျရှိတှငျ စဈအုပျခြုပျရေးကာလဖွဈသညျ့အတှကျ စဈကောငျစီတပျဖှဲ့ဝငျမြားကမတရားသညျ့နညျးလမျးမြား ဖွငျ့ငှကွေေးရှာဖှနေပွေီး အဆိုပါငှမြေားဖွငျ့ပငျ ရဲဘျော
သဈရှာဖှရောတှငျပွနျလညျအသုံးပွုနခွေငျးဖွဈသညျဟု တပျမတျောသားဟောငျး တဦးကသုံးသပျပွောဆိုသညျခုခတျေကသူတို့(စဈတပျ)ခတျေဘဲ။ သူတို့အတှကျကပိုကျဆံက လှယျနတော။ သူတို့အိတျထဲကစိုကျရှာရတာမှမဟုတျတာ။ရဲဘျောသဈကသူတို့ပိုကျဆံရှိရငျ တောငျ ရှာလို့မလှယျဘူး။ ရမယျဆိုရငျ သိနျး
၃၀ မဟုတျဘူး ၄၀ ဆိုလညျးပေးမှာဘဲဟု ၄ငျးကဆိုသညျလကျရှိတှငျ စဈကောငျစီတပျသို့ဝငျရောကျလိုသူနညျးပါးနပွေီး တာဝနျထမျးဆောငျဆဲတပျဖှဲ့ဝငျမြား သညျလညျး နစေ့ဥျထိခိုကျသဆေုံးနသေဖွငျ့ ၄ငျးတို့ ၏စဈသညျမိနျးမမြားကို
စဈသငျတနျးတကျရောကျ ခိုငျး၍လုံခွုံရေးယူခိုငျးနသေညျ့အပွငျ ရဲတပျဖှဲ့၊မီးသတျ၊အကြဥျးဦးစီးဌာနမြားမှ ဝနျထမျးမြား၏ မိနျးမမြားကို စဈသငျတနျးပေး၍ အငျ အားဖွညျ့တငျးရနျပွငျဆငျနကွေောငျး သိရသညျcrd ဟိနျးစံ/ဧရာဝတီတိုငျးမျ
စစ်ကောင်စီတပ် တပ်သားသစ်တဦးလျှင် သိန်း ၃၀ ဝန်း ကျင်ထိဈေးပေါက်နေပြီး တဦးစု​ဆောင်းနိုင်လျှင် ခွင့်တစ်လခွဲပေး
စစ်ကောင်စီတပ် တပ်သားသစ်တဦးလျှင် သိန်း ၃၀ ဝန်း ကျင်ထိဈေးပေါက်နေပြီး တဦးစု​ဆောင်းနိုင်လျှင် ခွင့်တလခွဲပေးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်များသို့ဝင်ရောက်လိုသူနည်းပါးနေသဖြင့် တပ်သားသစ်တဦးလျှင် သိန်း ၃၀ ဝန်း ကျင်ထိပေး၍ စုဆောင်းနေပြီး လူသစ်စုနိုင်သည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အား ခွင့်တ
လခွဲပေးနေကြောင်း စစ် ကောင်စီတပ် အသိုင်းအဝိုင်းထံကသိရသည်လက်ရှိတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားသစ်တဦးလျှင်ရေ တပ် နှင့်လေတပ်အတွက် ၁၅ သိန်းဝန်းကျင်၊ လက်ရုံးတပ်အ တွက် ၂၃ သိန်းဝန်းကျင်နှင့် ခြေလျင်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်များအတွက် ၃၀ သိန်းဝန်း ကျင်ထိပေး၍ လိုက်လံစု ဆောင်းနေရကြောင်း သိ
ရသည်ယခင်က စစ်သားသစ်တဦးလျှင် ရေတပ်နှင့်လေတပ်တွင် ၇ သိန်းဝန်းကျင်၊ လက်ရုံးတပ်အတွက် ၁၀သိန်းဝန်း ကျင်၊ တိုက်ခိုက်ရေးတပ်များအတွက် ၁၅ သိန်းဝန်းကျင်ဖြင့် စုဆောင်းရရှိနေသော်လည်း စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ယခုဈေးနှုန်းများထိပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ဈေးနှုန်းကတပ်မှူးပေါ်လစီပေါ်မူတည်တယ် ရဲဘော်သစ်တယောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားတာနဲ့ စု ဆောင်းရေးလောကသားတွေကအပြိုင်အဆိုင် ဈေးခေါ်ကြတယ်
အများဆုံးပေးနိုင်တဲ့သူကရတာဘဲ ရဲဘော်သစ်စုရတာအရမ်းခက်ခဲတယ် အရင်ထဲကမလွယ်တာခုကပိုဆိုးနေတယ် အရင်က ကျွန်တော်တို့ ခြေလျင်/ခြေမြန်ဆို ၁၅ သိန်း ၁၆ သိန်းဆိုတာထန်ကုန်ဘဲ
အရင်ထက်ဈေးအများကြီးပေးတာတောင် ဘယ်လိုမှစုလို့ အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ဟု နယ်လှည့်စစ်သားစု ဆောင်းရေးလုပ်ဆောင်နေသူတဦးက ဧရာဝတီတိုင်းမ်ကိုပြောသည်
လက်ရှိတွင် စစ်ကောင်စီအကြီးတန်းအရာရှိများက ရသည့်နည်းလမ်းဖြင့် စီမံချက်ရေးဆွဲ၍ စစ်သားသစ်စု ဆောင်းနိုင်ရေး တပ်မှူးများကို ဖိအားပေးစေခိုင်းနေကြောင်း သိရသည်
စစ်သားသစ်ကသူတို့(တပ်မှူး)တွေအတွက်အ ရေးကြီးတယ် တိုင်းလေးလပတ်အစည်းအဝေး တွေမှာ လေးလနေလို့မှတယောက်မှမစုနိုင်ရင် အပြောအဆိုခံရတယ်။ များများစုနိုင်တဲ့သူက ရာထူးတိုးဦးစားပေးခံရသလိုမြန်လည်းမြန်တယ်
ဒါကြောင့်လည်း အပြိုင်အဆိုင်တွေဈေးပေးကြ တာဟု မကွေးမြို့အခြေစိုက်အမှတ် (၃) စစ်သားစုဆောင်းရေးတပ်နှင့်နီးစပ်သူတဦးက ဧရာဝတီတိုင်းမ်ကိုပြောသည်ထို့ပြင် စစ်သားသစ်တဦးရရှိပါက စုဆောင်းလာသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်က ခွင့်တလခွဲ ခံစားခွင့်နှင့် ဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရကြောင်း သိရသည်။
ရဲဘော်သစ်တယောက်ရရင် ခွင့်တလခွဲရတယ်။ ဒါဘာ (တပ်ရင်းဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ)မှာဆုပေးတယ်။အရင်ကဆို တပ်ကထွက်ချင်လို့ ထွက်ခွင့်မြန်ချင် ရင် ရဲဘော်သစ် ၃ ယောက်စုပေးရတာမျိုးရှိတယ်
ခုနောက်ပိုင်းတော့ ရဲ ဘော်သစ်ကမရတာများပါတယ် ဟု ရန်ကုန်တိုင်းလက် အောက်ရှိ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးက ဧရာဝတီတိုင်းမ်ကို ပြောသည်လက်ရှိတွင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလဖြစ်သည့်အတွက် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကမတရားသည့်နည်းလမ်းများ ဖြင့်ငွေကြေးရှာဖွေနေပြီး အဆိုပါငွေများဖြင့်ပင် ရဲဘော်
သစ်ရှာဖွေရာတွင်ပြန်လည်အသုံးပြုနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု တပ်မတော်သားဟောင်း တဦးကသုံးသပ်ပြောဆိုသည်ခုခေတ်ကသူတို့(စစ်တပ်)ခေတ်ဘဲ။ သူတို့အတွက်ကပိုက်ဆံက လွယ်နေတာ။ သူတို့အိတ်ထဲကစိုက်ရှာရတာမှမဟုတ်တာ။ရဲဘော်သစ်ကသူတို့ပိုက်ဆံရှိရင် တောင် ရှာလို့မလွယ်ဘူး။ ရမယ်ဆိုရင် သိန်း
၃၀ မဟုတ်ဘူး ၄၀ ဆိုလည်းပေးမှာဘဲဟု ၎င်းကဆိုသည်လက်ရှိတွင် စစ်ကောင်စီတပ်သို့ဝင်ရောက်လိုသူနည်းပါးနေပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ သည်လည်း နေ့စဉ်ထိခိုက်သေဆုံးနေသဖြင့် ၎င်းတို့ ၏စစ်သည်မိန်းမများကို
စစ်သင်တန်းတက်ရောက် ခိုင်း၍လုံခြုံရေးယူခိုင်းနေသည့်အပြင် ရဲတပ်ဖွဲ့၊မီးသတ်၊အကျဉ်းဦးစီးဌာနများမှ ဝန်ထမ်းများ၏ မိန်းမများကို စစ်သင်တန်းပေး၍ အင် အားဖြည့်တင်းရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်း သိရသည်crd ဟိန်းစံ/ဧရာဝတီတိုင်းမ်
မွနျမာပွညျသူမြား ဆငျးရဲခွငျး လှတျကငျးအောငျ လမျးပွဆောငျပါမညျဟု တရုတျသံအမတျ ပွောပွီ..